Porn survey 2019: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြောင်းလဲပုံ (The Sunday Times) - Your Brain On Porn
porn စစ်တမ်း 2019: ဘယ်လိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကျနော်တို့လိင် (အဆိုပါတနင်္ဂနွေမ်) ရှိသည်လမ်းပြောင်းလဲနေပါတယ်
တစ်ဦးသီးသန့်စစ်တမ်းများတွင်ကျနော်တို့ကိုသူတို့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်ဘာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟုမေး - ဘယ်လိုသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုသက်ရောက်သည်။ ရလဒ်သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်
ဆောင်းပါးလင့်ခ် - The Sunday Times, သြဂုတ်လ 11 2019, 12: 01am
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုံကိုဘယ်လိုအစုလိုက်ပါသလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း ထိုအခါကလေး-boomer ရဲ့ရှာဖွေရေးသမိုင်းတစ်ဦးနှစ်တစ်ထောင်ရဲ့ထံမှမည်သို့မည်ပုံကွာခြားသနည်း ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းအဆိုအရကျွန်တော်တို့ကိုနီးပါးသုံးပုံနှစ်ပုံ (58%) ညစ်ညမ်းစောင့်နေကြလော့။ ကျနော်တို့အဘယ်သူကိုနှင့်အတူ, အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနှင့်မည်သို့မကြာခဏသူတို့စောင့်ကြည့်သောအရာကိုသူတို့ကိုမေးတယ်။ ဤတွင်, အိန္ဒိယ Knight ဟာရလဒ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းနှင့်ကလိင်ဘဝတွေကိုအဘို့အဓိပ်ပာယျကိုမေးတယ်။
ငါသိသိသာသာငါဖြစ်ချင်တယ်ထက်လျော့နည်းလစ်ဘရယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဖြစ်ငါ porn အကြောင်းကိုဝိရောဓိခံစားရတယ်။ အကြှနျုပျ၏ဗီဇအစဉ်အမြဲသငျသညျအသကျရှငျနဲ့တိုက်ရိုက်ပါစေရဲစိတ်ကူးယဉ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးသဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့ဘယ်သူမှလည်းမရှိအဖြစ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့င့်မနိုင်စဉ်းစားရန်ခဲ့ပြီး - ဒါပေမယ့်ငါယခုအမျိုးသမီးများ၏နာကျင်ရတဲ့နှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းမသိသောသစ်ကိုပုံမှန်ဖြစ်ပါသည် ။ ငါ မျက်နှာ၌လာကြတယ်၏လိင်ညီမျှ: အငယ်အမျိုးသမီးတွေအထူးသ၎င်းတို့၏သရုပ် (မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းတွန့်ဆုတ်) misogyny ၏အသုံးအနှုနျးမြားပုံပေါ်သောအရာ၏ထွေးပိုက်, များသောအားဖြင့်နာကျင်နှင့်တခါတရံတွင်အကြမ်းဖက်အသုံးပြုပုံစံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကိုစဉ်းစားဘယ်သို့သောအားဖြင့်တုန်လှုပ်နေပါတယ်။
ဒါဟာနာကျင်မှုသို့မဟုတ်အရှက်၏ဖြစ်စေတဲ့ယင်း၏အတော်လေးနယ်ပယ် bdsm (ကျွန်ခံခြင်းနှင့်စည်းကမ်းတစ်ခုထီးအသုံးအနှုန်း, ကြီးစိုးနှင့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့, sadism နှင့် masochism) Special ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ယခုအခါသာမန်ဖြစ်ပါတယ်ငါ့ကိုအံ့သြစေတယ်။ ပါးရိုက်လို့၏ bit, မွန်းကျပ်၏နည်းနည်း, စအို၏ bit နဲ့ - မပါပြဿနာတစ်ခုအပိုဆုငို, ငါ့ကိုရုံပျော်စရာမှထည့်သွင်းဖို့ငါ့ဖုန်းပေါ်မှာရိုက်ကူးကြကုန်အံ့။ ဒါဟာခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ပါသည်: porn sites များပေါ်တွင်ကပင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးအစားထိုက်ပါဘူး။ ဒါဟာလိင်ပါပဲ။ အင်္ဂါနေ့တွင်က Sky အတ္တလန္တိတ်ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့သောအဆိုပါ hit HBO ဆယ်ကျော်သက်ဒရာမာ Euphoria ပီတိ, အလယ်တန်း America မှာ sex- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆယ်ကျော်သက်များ၏ဘဝကို examine ။ သူတို့လူကြီးချဉ်းကပ်အဖြစ်ပြသသည့် 21st ရာစုတှငျမှေးဖှားပထမမျိုးဆက်တစ်ခု Apocalyptic အမြင်ပေးထားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ယောက်ျားလေးနှင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးကောင်လေးကရုတ်တရက်ကသူ့ဂျင်းဘောင်းဘီကိုချွတ် yank နှင့်အကြမ်းဖက်သူမ၏မွန်းကျပ်စတင်ရန်သာအဘို့, နမ်းဖို့ပါတီမှာအပေါ်ထပ်ကိုသွားပါ။
ကြမ်းတမ်းညစ်ညမ်းတဲ့မျိုးဆက် Z ကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်
ဤသည်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းထက်သတင်းဖော်ပြမှုဖို့ပိုမိုနီးစပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းကိုပြသသည့်အတိုင်း gen Z ကို (နှစ်အောက်ရှိသူများအသက် 22 နှင့်) အတွက် "ကြမ်းလိင်" - ဆံပင်ဆွဲ, ကိုက်ပါးရိုက်, မွန်းကျပ်နှင့်အခြားရန်လိုသည့်အပြုအမူ - ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံး porn အမျိုးအစားဖြစ်ခဲ့သည်။ 42 နှစ်အောက်ရှိသူများနီးပါးတစ်ဝက် (23%) ကသူတို့စောင့်ကြည့်ပျော်မွေ့ရာတစ်ခုခုကိုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားမျိုးဆက်နီးကပ် လာ. , နှိုင်းယှဉ်, နှစ်တစ်ထောင်ပဲ 29% (23 နှစ်အရွယ်မှ 38-) အတွက်မျိုးဆက်သစ်က X (17 နှစ်အရွယ်မှ 39-) နှင့် 54 ကလေး-boomers ၏% (၏ 6% 55 အသက် -73) ကရွေးချယ်ထားကြသည်။ က bdsm မှရောက်လာသောအခါ, gen Z ကိုနောက်တဖန်အခြားလူတိုင်း၏ထက်နည်း 17% နှင့်နှိုင်းယှဉ် 10% ကရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူ, လမ်းဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ screen ပေါ်မှာမဖြောင့်သည်: gen Z-အဖွင်၏ 12% သူတို့ porn နှင့်အခြားလေးပုံတပုံကနေအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့လိင်ပညာရေးကိုလက်ခံရရှိလို့ပြောအွန်လိုင်း porn သူတို့ရဲ့အသိပညာ၏ "အများစု" ထလုပ်ပြောကြသည်။ သငျသညျက၎င်း၏စားသုံးသူကို real-ဘဝလိင်မှ (7%) သို့မဟုတ် "အတန်ငယ်အလားတူ" (24%) ကြောင်း porn ကိုမှန်ကန်မဟုတ်ပါဘူးနားလည်ပေမယ့်လူများ၏သုံးပုံတပုံအကြောင်းကိုသူက "အလွန်ဆင်တူ" ဖွစျထည့်သွင်းစဉ်းစားယူဆလိမ့်မယ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါအမျိုးသမီးငယ်မကောင်းတဲ့, စိုးရိမ်ပူပန်-ထွက်လာပါတယ်လိင်ဆက်ဆံနေကြတယ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအရာမဟုတ်, မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့အ 14 နှစ်အရွယ်သမီးမှမကြာသေးမီကဖြစ်ပျက်တစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူမသည်သူမအကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြောင်းရက်စွဲတစ်ခုသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆုံးဆီသို့ဦးတည်ပါကသူမနှင့်အတူချစ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ရှိခြင်းခဲ့ချင်ပါတယ်သူချစ်စရာကောင်း, ယဉ်ကျေးယောက်ျားလေးလိင်မျှော်လင့်ခဲ့ကွောငျးထွက်လှည့်။ တိကျသောဖြစ်စအိုလိင်ဆက်ဆံ။ အဆိုပါမိန်းကလေးတစ်ဦးကညာ, မစိုးရိမ်တဒီသူမ၏သညျ့ရာတှငျမဝံ့မရဲလုပ်ရှိမရှိအံ့သြစရာမလိုဘဲသော်လည်း, ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမသည်သူမအိမ်ပြန်ရောက်တော့သည့်အခါသူမ၏မိခင်နှင့်အတူဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်, နှင့်စစ်မှန်သောလိင်နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအကြားခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်. သူမ၏ကလေးများကိုပြောသည်ခဲ့သူမိ၏ကြင်နာရှိပါတယ်။ ကလေးတိုင်းကိုနားထောငျမဟုတျဘဲ - လူတိုင်းမဒါကံကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်, ဒီပုံမှန်ပါပဲ။ လူငယ်တို့ gen Z-အဖွင် 15 နှင့် 17 ၏အသက်အရွယ်အကြား porn စတင်ကြည့်ရှုအားအလွန်များပါတယ်, သူတို့သည်ယခု "အများဆုံးကာလ 'ကကိုကြည့်ပြောပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ကလေး-boomers အများစုကသူတို့သုံးဆယ်သည်အထိသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစတင်ကြည့်ရှု, အခုသူတို့ပဲတစ်ချိန်ကတစ်ပါတ်ကစောင့်ကြည့်မပြောခဲ့ပါဘူး။
ဒါဟာရက်စွဲတစ်ခုပေါ်မှာကညာ, လိင်ကွဲ 14 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးမှထွက်ဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက် Vogue မကြာသေးမီက "စအိုလိင်ဆက်ဆံ: သင်သိထားရန်လိုအပ်သောအရာကို" ဟုခေါ်ရှည်လျားသောအပိုင်းအစသို့ပွေးလေ၏လျှင်ပင်စအိုလိင်ဆက်ဆံရန်မျှော်လင့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အပေါ် urethra, စအို, လိင်အင်္ဂါနှင့် - - ထိုအစေ့မပါဝင်ခဲ့ပါကြောင်းဒါကဇီဝဗေဒပုံဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ "ဒီစအိုအလွန်တင်းကျပ်စွာဖြစ်ပါသည်, နှင့်သင့် rectal ဧရိယာထဲမှာတစ်ခုခုရှိခြင်း၏ခံစားချက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ သင့်ရဲ့အလွန်တင်းကျပ်လိင်အင်္ဂါတစ်ခုခုရှိခြင်း၏ခံစားချက်လည်းထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောနိများမှာ - ဘာလဲ? ပျင်းစရာ? ဒီထက်ပျော်စရာ? ပင်အပျိုဖော်ဝင်စကတဆင့်သေးမဟုတ်သူတစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းစာဖတ်သူများမှတစ်နည်းနည်းစတုရန်း?
တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦး၏မိဘအဖြစ်, ငါလူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. အကျည်းတန်ပုံပြင်များများစွာကြားရပြီ။ တချို့ကစိတ်ဒဏ်ရာမိန်းကလေးငယ်များပါဝငျသညျ။ တချို့ကပြဿနာကိုညစ်ညမ်းအပေါ်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များအခွခေံနှင့်အတူအဘယျနားမလညျတဲ့သူယောက်ျားလေးများပါဝင်ပတ်သက်နေ - foreplay ဥပမာ, feature မပါဘူး - သို့မဟုတ်ရင်းနှီး pics တောင်းနှင့်အတူ။ တချို့က porn ကြည့်ရှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်သူတို့၏အလောင်းများကိုအကြောင်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံလောက်နစ်နာမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ခံစားချက်တွေကိုသူယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများပါဝငျသညျ။ ထိုသို့ဖွင့်လူငယ်များမဟုတ်ဘူး: အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေဆိုသူနီးပါးလေးပုံတစ်ပုံ (23%) ဟာသူတို့ရဲ့ porn စားသုံးမှုဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ် "အပျက်သဘောထိခိုက်" နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်သူတို့ကိုရိပ်မိလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကြောင်းသူတို့ကိုစိတ်ပူလုပ်သောခံစားရတယ်။ ဤသည်မိန်းမတို့အဘို့အထူးသဖြင့်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာဗီဒီယိုအခြားသူများကိုသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်နှင့်အယောနိအကြောင်းကိုသူတို့ကိုမလုံခြုံအောင်ညစ်ညမ်းဒေါ်ခင်မျိုးသက်ကတင်ပြထားပါတယ်စဉ် "ကိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ်လမ်းပိုင်းအမှတ်သို့မဟုတ်အစက်အပြောက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကိုပါးလွှာ, လှပသောမိန်းကလေး" အမြဲကပြောသည်။
ဒီပတ်ပတ်လည်တချို့ကပုံပြင်များ grimly ရယ်စရာနေသောခေါင်းစဉ်: မိတ်ဆွေတစ်ဦးပဲရစ်နောက်ဆုံးတန်ဂိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ - တဲ့လူလတ်ပိုင်း Marlon Brando စအိုတစ်ဦးချောဆီကိုအဖြစ်ထောပတ်ကိုသုံးပြီး, ထိုအများကြီးအသက်ငယ်မာရီယာ Schneider rapes ထားတဲ့အတွက်တချိန်ကပိတ်ပင်ထား 1972 ရုပ်ရှင် - သည့်အခါသူမ၏နှောင်းပိုင်းတွင်-ဆယ်ကျော်သက် / အစောပိုင်း-နှစ်ဆယ်ကျော်ကလေးတွေသူတို့ကအော့နှလုံးနာခဲ့သညျ။ သို့လိုက်ပေမယ့်မှသာအပြည့်အဝဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်ရှိခြင်းဇာတ်ကောင်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ: သဘောတူညီခကျြ porn အတွက်ဆီလျှော်သည်။ titillation အဘို့ကိုသာခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်နှင့်ထိပ်တန်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း mags နှင့်အတူကြီးပြင်းလာရသူကို pre-အင်တာနက်လူငယ်များနှင့်မတူဘဲမျိုးဆက်သစ် Z ကိုသူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဘဝတွေကိုများအတွက် Wi-Fi နှင့်စမတ်ဖုန်းများခဲ့ကြပါပြီ (ဗြိတိန်တွင် PornHub အားလုံးကိုအသွားအလာ 67% ယခုတစ်ကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် စမတ်ဖုန်း) ။
တစ်ဦးကမိတ်ဆွေတစ်မကြာသေးမီကသူအဖြစ်မှန်အမြဲစိတ်မပျက်စေနိုင်အောင်အများကြီး porn စောင့်ကြည့်မယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ "ပုံမှန်" မိန်းကလေးများနှင့်အတူကတက်ရဖို့မတတျနိုငျသူသည်သူမ၏ High-ရရှိ, spectacularly ကောင်းသော-ရှာဖွေနေ 19 နှစ်အရွယ်သားလောက်ပြောတယ်။ သူက porn စွဲကနေပြန်လည်နာလန်ထူ၌တည်ရှိ၏, တဖန်သူဝေးတစ်ဦးတည်းသာကနေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလည်းလျင်မြန်စွာ "ခေတ်ရေစီးကြောင်း" ပစ္စည်းပစ္စယများပင်ပန်းတယ်နှင့်အဆက်မပြတ်အသုံးပြုသူများအ rougher ပိုအဖျက်သမားတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေနေနှင့်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာပြောင်းလဲပစ်ရန် porn များ၏စွမ်းရည်အပေါ်အလင်းကိုသွန်း။ နီးပါးတတိယ (29%) ဟာသူတို့ရဲ့အရသာလျော့နည်းခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းနှင့်အလားတူအရေအတွက်သည် (31%) က ပို. ပို. ခက်ခဲမိမိတို့၏အလိုဆန္ဒများ sates ကြောင်း porn ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ "ဒါဟာငါ့အအရသာကျေနပ်ကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယကိုရှာခက်ခဲဖြစ်လာသည်" ဟုအထီး gen-X ကိုတုံ့ပြန်ဟုပြောသည်။
Unsurprisingly, ဘာ porn စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကောင်းပါတယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းအဘို့ဆိုးရွားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနများတွင် 23% ဟာသူတို့ရဲ့ porn စားသုံးမှုအဆိုး 17% ကို real-ဘဝမိတ်ဖက်များကနှိုးဆော်ခြင်းခံရဖို့က ပို. ခက်ခဲရှာဖွေတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးထိခိုက်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ "Porn သမားရိုးကျလိင်လိုဘယ်တော့မှငါ့ကိုထွက်ခွာနေပါတယ်" ဟုဦးတည်းတုံ့ပြန်ဟုပြောသည်။ နောက်ထပ် "ဒါဟာငါ့ရည်းစားလို၏နယ်နိမိတ်တွန်းဖို့ကြိုးစားစေသည်။ " ကဆက်ပြောသည်အခြားသူများကိုပိုပြီးလင်းလင်းခဲ့ကြသည်: သူတို့က "ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲအထွတ်အထိပ်မှမဖြစ်နိုင်တာ" ကိုရှာပါ။
ကျွန်မအသက်ငယ်စဉ်အခါ, အစဉ်မပြတ်ငါလမ်းတစ်ခုမရေ, လစ်ဘရယ်မျိုးအတွက်လိုလားတဲ့ porn အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားချင်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ငါကဲ့သို့သောသူ Andrea Dworkin အဖြစ်အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများပျက်စီးခြင်းနှင့်ခြောကျခြားဖွစျပွီး, အစဉ်မပြတ် misogyny နှင့်မည်သို့အားလုံး porn Doom တစ် dungareed Voice ကိုကဲ့သို့, မိန်းမတို့အားအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်ဒဏ်ရာတစ်ခုအခမ်းအနားခဲ့အကြောင်းကိုအပေါ်ကန်ပြီးခဲ့ကြသည်ထင်; ပြန်ရှာနေသူကိုပရောဖကျနဲ့တူပုံရသည်။
* အဆိုပါစစ်တမ်းဟာကျယ်ပြန့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ 5,690 ဖြေဆိုသူ, 3,415 (58%) သူတို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်း watched ကဆိုသည်။ ရလဒ် 3,415 ၏အစိတ်အပိုင်းအစုထဲကနေယူထားပါသည်
Jenna ဒေးဗီးစ်နှင့် Louisa McGillicuddy ခြင်းဖြင့်ပြုစုဒေတာများ